कुन निर्वाचनमा कति मतदाता ? « Margadarsannews.com
कुन निर्वाचनमा कति मतदाता ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने मतदाताको अन्तिम नामावली आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा भएका प्रत्येक निर्वाचनमा अघिल्लोमा भन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभा सदस्यको लागि भएको दोस्रो निर्वाचन भने अपवादमा पर्छ । किनकि यो निर्वाचनमा अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमाभन्दा मतदाता संख्या घटेका थिए ।
तत्कालिन राज महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘क’ गरी बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरेका थिए । त्यसपछि उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन चर्केपछि २०३७ सालमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । मध्यावधि निर्वाचनमा कूल मतदाताको संख्या १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ रहेको थियो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेले ८८ सिट जिती संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।